Noocyada cimilada: astaamaha iyo kala soocida | Saadaasha Shabakadda
Sidaan ognahay, illaa iyo hadda waxaan helnay oo keliya nolosha dhulkeenna waxaana sabab u ah aagga ay ku jirto marka loo eego Qorraxda. Waxaan ku jirnaa waxa saynisyahannadu ugu yeeraan "aagga la degganaan karo". Tan waa ku mahadsan tahay jawiga horeba lakabka ozone Waan noolaan karnaa. Dhulku wuxuu soo saaray noocyo kala duwan noocyada cimilada waxay kuxirantahay hadba heerkulka aan kusocno. Si ka duwan heerkulka aan ka helno inta ka hartay Nidaamka Qoraxdu ka kooban tahay, meeraheennu wuxuu ku dhex socdaa heerkul aad u hooseeya.
Qormadan waxaan ku baran karnaa noocyada kala duwan ee cimilada ka jirta dhulkeenna iyo astaamaha uu mid waliba leeyahay. Ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato?
1 Waa maxay cimiladu?
2 Noocyada cimilada marka loo eego waxa ka jira Dunida
2.1 Cimilo diiran
2.2 Cimilo xumo
2.3 Cimilada qabow
Waa maxay cimiladu?
Waa caadi in lagu qaldo saadaasha hawada iyo cilmiga cimilada. Kala soocida fikradahan waa in si cad loo fahmaa si si fiican loo fahmo. Markaan fiirino ninka cimilada ah oo uu noo sheegayo in labo maalmood gudahood uu roob da’o doono isla markaana ay jiri doonaan dabeylo dabeylkeedu yahay 50 km / h, wuxuu ula jeedaa cimilada. Xaaladdan, waxaan falanqeyneynaa xaaladaha cimilada ee dhici doona waqti iyo goob cayiman. Tani waa qayb ka mid ah saadaasha saadaasha hawada taas oo ay ugu mahadcelinayaan tiro ka mid ah qalabka saadaasha hawada, waxaad ku ogaankartaa kalsooni heer sare ah waxa dhici doona.
Dhinaca kale waxaan leenahay cimilada. Cimilada waxaa lagu qeexi karaa inay tahay gobalada doorsoomayaasha ee joogtada ku sii jira waqtiga. Xaqiiqdii weedhan waxba kama ogaan doontid. Waxaan si fiican ugu sharxi doonnaa si qoto dheer. Isbedelada saadaasha hawada waa heerkulka, heerka roobab (roob ha noqdo ama baraf), nidaamyada duufaanka, dabaysha, cadaadiska Hawada, iwm Hagaag, setka dhamaan doorsoomayaashaani waxay leeyihiin qiimayaal sanadka oo dhan. Waxay ku caan baxeen ilaaliyayaasha cimilada.
Dhammaan qiimayaasha isbeddelada saadaasha hawada ayaa la duubay waana la falanqeyn karaa maadaama ay had iyo jeer ku dhow yihiin hal marin isla markaana lagu falanqeeyo a jaantus. Tusaale ahaan, Andalusia wax heer kul ah lama diiwaan gelin wax ka hooseeya -30 digrii. Tani waa sababta oo ah qiimayaashan heer kulku uma dhigmaan cimilada badda Mediterranean. Marka dhammaan xogta la ururiyo, cimilada waxaa loo qoondeeyay iyadoo loo eegayo qiyamkan
Tiirka woqooyi waxaa lagu gartaa heerkul qabow, dabaylo xoog leh, roobab qaab baraf ah, iwm. Sifooyinkaasi waxay ka dhigayaan inay iyagu isku sheegaan cimilada cirifka.
Noocyada cimilada marka loo eego waxa ka jira Dunida
Cimilada dhulka laguma kala sooci karo oo keli ah iyadoo loo eegayo isbeddelada saadaasha hawada ee kor ku xusan, laakiin sidoo kale arrimo kale ayaa soo dhex gala Waxay yihiin joogga iyo loolka ama fogaanta meel marka loo eego badda. Qeybinta soo socota waxaan ku arki doonnaa qiyaas ahaan noocyada cimilada jira iyo astaamaha mid kasta. Intaas waxaa sii dheer, nooc kasta oo weyn oo cimilo ah waxaa jira noocyo aad u faahfaahsan oo aad u faahfaahsan oo u adeegaya aagag yaryar.
Cimiladaas waxaa lagu gartaa heerkul sarreeya. Celceliska heerkulka sanadlaha ahi waa qiyaastii 20 digrii waxaana jira farqi aad u weyn oo u dhexeeya xilliyada. Waa meelaha ay ku badan yihiin cowska iyo keymaha qoyaan iyo, xaalado badan, roob badan. Waxaan helnay noocyada kala duwan:
Cimilada Equatorial. Sida magaceedu tilmaamayo, waa jawi ku fidsan dhulbaraha. Roobku guud ahaan wuu badan yahay sanadka oo dhan, waxaa jira qoyaan badan mar walbana waa kulul yahay. Waxaa laga helaa aagga Amazon, bartamaha Afrika, Insulindia, Madagascar iyo Yucatan Peninsula.
Cimilada Kulaylka. Waxay la mid tahay jawigii hore, kaliya waxay ku fidsan tahay safka kuleylaha kansarka iyo Capricorn. Waxa kaliya ee ay ku kala duwan yihiin ayaa ah in halkan roobabku ay badan yihiin oo keliya bilaha xagaaga. Waxaa laga heli karaa Caribbean, Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, qaybo ka mid ah Koonfurta Ameerika, Koonfur-bari Aasiya, qayb ka mid ah Australia, Polynesia, iyo Bolivia.
Cimilada kuleylka ah. Cimilada noocan ahi waxay leedahay heerkul kala duwan oo roobkuna wuu kala duwan yahay sannadka oo dhan. Waxaa lagu arki karaa koonfur-galbeed Waqooyiga Ameerika, koonfur-galbeed Afrika, qaybo ka mid ah Koonfurta Ameerika, bartamaha Australia, iyo Bariga Dhexe.
Lamadegaanka iyo lamadegaanka. Cimiladan waxaa lagu gartaa inay leedahay heerkul sarreeya sannadka oo dhan iyadoo heerkulkeedu aad u sarreeyo inta u dhexeysa habeen iyo maalin. Ma jiraan wax qoyaan ah, dhirta iyo duunyada ayaa ku yar roobka sidoo kale waa yar yahay. Waxaa laga helaa bartamaha Aasiya, Mongolia, galbeedka bartamaha Waqooyiga Ameerika, iyo bartamaha Afrika.
Waxaa lagu gartaa inay leeyihiin heerkul celcelis ahaan ku dhow 15 digrii. Cimiladaas waxaan ku arki karnaa xilliyada sannadka oo si wanaagsan loo kala soocay. Waxaan ka helnaa meelo loo qaybiyey inta u dhexeysa u dhexeeya 30 iyo 70 digrii oo isku mid ah. Waxaan haynaa nooc hoosaadyada soo socda.
Cimilada Mediterranean. Astaamaheeda ugu waaweyn waxaan ka helnaa xagaaga oo aad u qalalan oo qorax leh, halka jiilaalkuna yahay roob. Waxaan ka heli karnaa badda Mediterranean, California, koonfurta Koonfur Afrika, koonfur-galbeed Australia.
Cimilada Shiinaha. Cimilada noocan ahi waxay leedahay duufaanno kulaylaha iyo jiilaalka oo aad u qabow.
Cimilada badweynta. Waa tan laga helo dhammaan meelaha xeebta ku yaal. Guud ahaan, had iyo jeer waxaa jira daruuro badan iyo roobab, in kastoo aysan jirin jiilaal ama xagaa leh heerkul daran. Waxay ku taal xeebta Baasifigga, New Zealand iyo qaybo ka mid ah Chile iyo Argentina.
Cimilada Qaaradaha. Waa cimilada gudaha. Waxaa laga helaa aag aan xeeb lahayn. Sidaa darteed, iyagu horay ayey u kululaadaan oo u qaboojiyaan mar hore maadaama aysan jirin bad u shaqeysa sida qalabka xakameynta kuleylka. Cimilada noocan ah waxaa badanaa laga helaa bartamaha Yurub iyo Shiinaha, Mareykanka, Alaska iyo Kanada.
Cimiladaan, heerkulku badanaa kama badna 10 darajo Celsius waxaana jira roob badan oo qaab baraf iyo baraf ah.
Cimilada Polar. Waa jawiga ulaha. Waxaa lagu gartaa iyadoo leh heerkul aad u hooseeya sanadka oo dhan iyo maqnaanshaha dhirta maadaama dhulku si joogto ah u barafoobay.
Cimilada buuraleyda sare. Waxaa laga helaa dhammaan aagga buuraha dheer waxaana lagu gartaa roob badan iyo heerkullo hoos u dhaca dherer ahaan.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad sifiican ku ogaan karto noocyada cimilada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Cimilada » Noocyada cimilada
Aad u wanaagsan oo aad u cayiman !! Aad bay ii caawisay! Mahadsanid!
Jawaab Flor Gonzàlez
Mahadsanid, waxay igu caawisay hawshaydii qolka iskuulka -w-
Jawaab Bella vk